1,126 Arday Oo Ka Qallin-jebiyey Jaamacad Ku Taalla Hargeysa ..
1,126 Arday Oo Ka Qallin-jebiyey Jaamacad Ku Taalla Hargeysa + SAWIRRO
Hargeysa (Dhamays) – Jaamacadda Hargeysa (University Of Hargeisa), ayaa waxa Maanta ka qallin-jabiyey Dufcaddii 14-aad ee ka Aflaxda Muddadii ay Jaamacaddu jirtay.
Dufcaddan oo ka kooban Arday ka badan 1, 126 Arday oo bartay Culuum kala duwan oo Qaranka Somaliland Muhiim u ah, ayaa waxa Munaasibaddii Qallin-jebintooda ka qayb-galau Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), Wasiirro, Shir-guddoonnada Goleyaasha Baarlamaanka, Madaxda Xisbiyada Qaranka, Waalidiin iyo Marti-sharaf kale oo aad u tiro badnaa.
Munaasibadda ay Qallin-jebintooda ugu Dabbaal-degayeen 1, 126 ee Arday oo Maamulka Jaamacadda Hargeysa iyo Madaxda Xisbiyada iyo Dad kale oo Muhiim ahi Hadallo Waano iyo Dardaaran ah ka jeediyeen, waxa gebogabadii Khudbad dheer ka soo jeediyey Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), waxaanu khudbaddiisa ku bilaaba sidan:- “Mudanayaal iyo Marwooyin, Ugu horreyn, milgo iyo maamuus weyn bay ii tahay, in aan idinkala soo qayb-galo Xafladda Qalin Jebinta Dufcadda 14aad ee Jaamacadda Hargeysa.Mar labaadka, waxaan jecelahay, in aan halkan ka hambalyeeyo, dhammaan ardayda maanta qalin jebisay iyo waalidkoodii soo gargaaray, iyo cid kasta oo gacan ka geysatay, guushan ay gaadheen geesiyaashan aynu goobtan ku gelbinayno.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Tan iyo intii bini-aadamku ifka ku tarmay ee kala yeeshay degelo u kala gaar ah, waxaa markhaati ma doon ah, in uu kala tamar iyo tacab batay, ama kala raganimo roonaadey. Haddaba, waxaa is weydiin mudan, Adanaha ma waxaa is dhaafiyey dhulka ay ku kala nool yihiin? Ma waxaa is dhaafiyey midabka, madaahiibta iyo luqadaha ay awoowayaashood ka dhaxlaan?
Mudanayaal iyo Marwooyin, Muddadii toddobada sannadood ahayd, ee aannu talada dalka haynay, Xukuumadda Xisbiga Kulmiye ee aan odayga u ahaa, waxay ka samaysay isbedde weyn dhinac kasta oo nolosha bulshada ah, gaar ahaan dhinaca waxbarashada. Bal in yar ila wadaaga xogtan kooban ee ka markhaati kacayasa hadalka aan kor ku sheegay, “illayn Beenaale Markhaatigiisa, ayuu fogeeya’e”.
Dhinaca kale, waxaannuu dhisnay muddadaa 397 dugsi Hoose-Dhexe, iyadoo tirada dugsiyada Hoose-Dhexe maanta yihiin 928 dugsi. Waxaannuu ka dhignay waxbarashadii Hoose-Dhexe bilaash, si loo wada awoodo, taasi waxay keentay in ay korodho tiradii ardaydu, dugsiyadana la kordhiyo. Tirada ardayda dhiganaysay badhtamihii 2010-kii dugsiyada Hoose-Dhexe waxay ahayd 156,699 (Boqol iyo Lix iyo Konton Kun, Lix Boqol iyo Sagaal iyo Sagaashan Arday). Halka 2017-ka ay dhiganayaan 267,484 (Laba Boqol iyo Toddoba iyo Lixdan Kun, Afar Boqol iyo Afar iyo Siddeetan Arday). Waxa kordhay 110,785 (Boqol iyo Toban Kun, Toddoba Boqol iyo Shan iyo Siddeetan Arday), oo u dhiganta %42.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Siyaasadda xoogga lagu saaray waxbarashada qaybtii hoose, waxay keentay in ay badiso ardaydii Jaamacadaha dalka soo gelayey, ama ka qalin jebinayey, taas oo ay ka markhaati tahay warbixinta Wasaaradda Waxbarashadu jeedisay. Dhinaca kale, waxaa hubaal ah in muddadaa Jaamacadaha waaweyn ee dalku kor u kac iyo horumar weyn ku yimi, si gaar ah waxaan u xusi karaa una ammaanayaa Jaamacadda Laascaanood (Nugaal University), Jaamacadda Burco, Jaamacadda Camuud iyo Jaamacadda Hargeysa, oo labduba tusaale fiican iyo bar-tilmaameed u ah Jaamacadaha Bariga iyo Badhtamaha Africa.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Horumarinta Jaamacadaha dalka, waxba kalamaannu hadhin, taana waxaa markhaati ka ah, isbeddelka ku yimi iyo heerka ay marayaan. Jaamacadda Hargeysa, ma muran baa ka taagan in uu faraq weyni u dhexeeyo shalay iyo maanta. Waxay Soomaalidu ku maah-maahdaa: “Daayeer baa lagu yidhi waar qadhaab ka waran? Wuxuu yidhi tunkayga iyo tagoogayga ka eeg”. Sidaa darteed, waxaan leeyahay wixii Jaamacaddan u kordhay muddadii aan qaranka hoggaaminayey, saaka tunkeeda iyo tagoogadeeda ayay ka muuqata,tigaadi iyadaa laacda’e. Maalmahan soo socda, waxaannu dhisaynaa Xarunta sheybaadhka Caafimaadka oo ku kici doonta lacag dhan $200,000 (Laba Boqol oo Kun oo Dollar).
Gun iyo Gebogabo, Waxaan idinkula dardaarmayaa, in aad ka qayb qaadataan dedaalkada madaxdu ugu jirto, sida:
4.La dagaalanka faafida balwadaha iyo dhaqamada xun xun ee dabar-goyen kara bulshada.
Ugu dambayn, Idam EEBBE, dalka dhawaan waxaa ka dhici doonta dorashadii Madaxtooyada, ardayda jaamacaduhuna waxay ka mid yihiin halbawla-yaasha gacan siiya Guddida Doorashooyinka, sidaa darteed, waxaan idinkula dardaarmayaa in aad xilka u gudataan si sharciga waafaqsan oo xilkasnimo iyo xaqsoor ku jiro, Alleheen Baa Mahad Leh.”
Previous: Somaliland Oo Daawanaysa Sida Dawladda Soomaaliya Ula Wareegayso Maamulka Hawada
Next: Suuqyada Somaliland Oo Laga Waayay Khudaar Iyo Dawladda Oo Ka Hadashay Sababta Keentay